The Ab Presents Nepal » सुन तस्करीका आरोपी प्रधानमन्त्रीसँगै भियतनाम र कम्बोडियामा!
सुन तस्करीका आरोपी प्रधानमन्त्रीसँगै भियतनाम र कम्बोडियामा!
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैशाख २६ गतेदखी भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा छन् । उनि दुई देशको भ्रमण पुरा गरी आज स्वदेश फर्किदैछन् । भ्रमणका बेला दुवैदेशसँग केही सम्झौता भएका छन् ।
सुनकाण्ड, विमानस्थलको जग्गामाथी अनाधिकृत भवन निर्माण र भ्याट छली प्रकरणमा, यी व्यक्तिको नाम अग्रपंक्तिमा आउछ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले त आफ्नो प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा मल्होत्राले बनाईरहेको भवन अनाधिकृत भएको र भाडा समेत नतिरेको भन्दै छानविन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।मल्होत्राको कम्पनी रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिले विमानस्थलका तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतिश चन्द्रलाल सुमनलाई हातमा लिई केही प्रावधान कानुनविपरीत राख्दै विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएका थिए । उनले ०६९ साल कात्तिक २ गते पर्यटन तथा विमानस्थल व्यवसाय गर्ने भन्दै सो जग्गा लिजमा लिएका हुन् ।
तर, अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाईको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका ओलीले गरिरहनु भएको छ । उहाले आफ्नो पहिलो काम भनेको भष्ट्रचारीविरुद्ध कारवाही गर्ने र सुशासन कायम राख्ने हो भनेर दैनिक भाषणा गरिरहेका छन । अझ प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्ने हो भने अनियमितता गर्नेको मुखसम्म हेर्दिन भनेका छन् । तर, काण्डै काण्डमा संसदीय समितिले दोषी समेत ठहर गरेका मल्होत्रालाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सँगै लिएर हिड्छन् । भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर उनले फोटो खिचेर पोष्ट गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनि कम्बोडिया–नेपाल बिजनेश फोरमको मञ्चमा देखिएका छन् ।अघिल्लो रोहमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका कम्बोडियाली समकक्षी देखिएका छन् । ओलीका ठिक पछाडी दाहिने साइटमा मल्होत्रा खैरोरंगको कोटपाइन्टमा ठटिएर उभिएका छन् । यसले नै प्रधानमन्त्रीको सुशासनको नारालाई चुनौती दिन्छ । मल्होत्राको प्रधानमन्त्रीसँग यो पहिलो भ्रमण भने होइन् । यसअघि पनि चिन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाँदा समेत उनि सो भ्रमण दलमा सहभागी भएका थिए । जतिवेला नेपालमा चर्चिच सुनकाण्डका विषयमा छानविन चलिरहेको थियो ।